प्रमुख प्रतिपक्ष विरुद्ध सत्ता गठबन्धन हुदा पनि आएको चुनाव परिणमले के संकेत गर्छ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रमुख प्रतिपक्ष विरुद्ध सत्ता गठबन्धन हुदा पनि आएको चुनाव परिणमले के संकेत गर्छ ?
सन्दर्भः दोश्रो स्थानीय निर्वाचन
शुक्रबार, असार १६, २०७४
- ईश्वर पोखरेल, महासचिव , एमाले
सरकारले किसानहरुको खेतीको समय र बर्षालाई समेत वेवास्ता गरेर तमासापूर्ण तरिकाले असार १४ का लागि चुनावको मिति सारेको थियो। तर लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिसग जोडेर जनताले मतदानमा जुन सहभागिता देखाए त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा प्रदेश नं ७ मा सत्ताले जुन किसिमको ताण्डव देखायो त्यो जति निन्दा गरेपनि पुग्दैन।
आछाम , बाजुरा, डोटी लगायतमा सत्ता पक्षको ज्यादतीले हर्दै नाघेको छ। सत्तालाई प्रयोग गरेर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास भएको छ । ति ठाँंउमा सेना परिचालन न भएको भए अरुले मतदान गर्न सक्थे कि सक्दैनथे भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। यस्तो ठाँंउमा सत्ता गठबन्धनको निर्लज्जता प्रकट भयो। कतिपय ठाँंउमा चुनावमा खटिएका कर्मचारी, र प्रहरीको समेत भूमिका निष्पक्ष देखिएन ।
निर्वाचन आयोग आयोगका रुपमा देखिएन। यसको सबैधानिक हैसियत छ। तर यो सरकारको आदेश पालक जस्तो देखियो। अहिले ७ नं प्रदेशको परिणामलाई लिएर एमाले त्यहाँं पछि परेको हो कि भन्ने अनेक टिप्पणी आएको छ। तर कुरा त्यस्तो होइन। सबै परिणामा आईसक्दा हामी तीनवटै प्रदेशमा पहिलो हुन्छौ ।
संसारमा कतै नभएको गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको छ। एउटा प्रतिपक्ष विरुद्ध सत्ता पक्षको गठबन्धन देशव्यापी छ। यति हुदा पनि एमालेलाई पहिलो हुनबाट कसैले रोक्न सकेन। यदि सिंगल सिंगल लडेको भए के हुने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको परिणामबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
दुई नं प्रदेशको निर्वाचन असोज २ मा हुदैछ। कतिपय मानिसहरु अव २ बाट एमाले पत्तासाफ हुन्छ भनि बखानी रहेका छन। तर चुनाव हुन दिनुस त्यो प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो पार्टी हुने छ।
पोखरेलले सगरमाथा टेलिभिजनलाई शुक्रबार बिहान दिएको अन्तरवार्ताको एक अंश